Toca Life: World 1.0.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.4 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ပညာေရးဆိုင္ရာ Toca Life: World
Toca Life: World ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကျနော်တို့စာသားတက်ခုန်ခြင်းနှင့် TOCA ဘဝကိုရန်သင့်အားကြိုဆိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆင်းနေတဲ့: ကမ်ဘာ့။ ဒါဟာတူညီတဲ့အာကာသအတွင်းအတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ Toca ဘဝက apps များ (စီးတီး, အားလပ်ရက်, ရုံး, ဆေးရုံနှင့်ပိုပြီး) ၏အားလုံးတတ်၏သောအကြီးစား App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအမှန်ပဲ။ အခုတော့အရာအားလုံးကစား-သောအရပ်တို့ကိုဇာတ်ကောင်များ၏တဦးတည်းအကြီးအကျယ်ကမ်ဘာပျေါတှငျခြိတျဆကျသညျ, သင်ကအမည်။ အားလုံးသင် TOCA ဘဝကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အခါ: World!
TOCA ဘဝကိုမိတ်ဆက်ခြင်း: ကမ်ဘာ့
သင်ကအိမ်သာ, သို့မဟုတ် city- ကျော်တာကနေကလေးငယ်တစ်ဦးကိုမကောင်းသောဂိုဏ်းကိုရပ်တန့်ကဲ့သို့အပင် crazier တစ်ခုခုသင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်အစ်ကိုထောင်ထဲမှာထားတဲ့ Toca ဘဝက app ကိုသို့ငုပ်ခြင်းနှင့်သင်လိုချင်သောကဲ့သို့သမျှလုပ်ဖို့ပျော်စရာ, flush အစားအစာကိုဆင်းခဲ့တယ်ထင်ခဲ့လျှင် ထို့နောက်ရုံသငျသညျစောင့်ပါ။ TOCA ဘဝကိုခုနှစ်တွင်: ကမ္ဘာ့သင်ချင်တယ်ဆိုတည်နေရာအတွက်သင့်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်နှင့်အတူပုံပြင်များဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ပင်ထပ်မံသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းနေတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ယူလိုပါသလား? လုပ်သာလုပ်။ အဆိုပါစကိတ်ပန်းခြံတစ်ခုပျင်းရိယူခဲ့? အပေါ် Rock ။ အဆိုပါအလှပြင်ဆိုင်မှဆရာဝန်ကို ယူ. သူမ၏ဆံပင်အစိမ်းရောင်ဆိုးဆေးအသုံးပြု? သေချာတာပေါ့, အဘယ်ကြောင့်မ။ TOCA ဘဝကိုခုနှစ်တွင်: ကမ္ဘာ့, သင်သူဌေးကနေနှင့်သင်တလျှောက်သွားပါအတိုင်းဇာတ်လမ်းကိုတက်စေရ။
FIRST, LOCATION သို့ထည့်သွင်း
TOCA ဘဝကို Download: ကမ္ဘာ့အကြှနျုပျတို့ဆံပင်ညှပ်သမား, ထိုကုန်တိုက်နှင့်အစားအစာတရားရုံးနှင့်ပင်တိုက်ခန်းကဲ့သို့ Bop စီးတီး, သငျသညျကိုစူးစမ်းဖို့အဘို့ 8 ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများနှင့်အတူတက်ကြွမြို့ဧရိယာနှင့်အတူချက်ချင်းထ load ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာ့ဖလားတည်ဆောက်ခြင်းကိုစတင်နေရာကောင်းတခုဖွင့်ကြောင့် TOCA ဘဝကိုနှင့်တကွကြွလာ: သင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်သည့်အခါလောက။
အကယ်လို့သင်ဟာထားသော TOCA ဘဝကိုအက်ပ်များလိုပါတယ်
သငျသညျထားပြီး Toca ဘဝကစီးရီးအတွက် apps များနှင့်အတူကစားနေကြသနည်း ဂရိတ်! သငျသညျ TOCA ဘဝကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အခါ: ကမ္ဘာ့အကြှနျုပျတို့သညျထိုအကြီးစား app ကိုစပစ္စည်းပစ္စယများအားလုံးဆောင်ကြဉ်းကူညီပါလိမ့်မယ်။ ထိုအခါသင်သည်ရောစပ်ခြင်းနှင့်သင်လိုချင်သောသို့သော်တည်နေရာနှင့်ဇာတ်ကောင်ကိုက်ညီခြင်းဖြင့်ဒီကမ္ဘာသစ်ကိုစတင်နိုင်ပါသည်။
NEW Stuff DOWNLOAD ပထမ BE
TOCA ဘဝကိုအကြောင်းကိုရိုင်းရဲ့နောက်ထပ်အရာ: ကမ်ဘာ့ကအမြဲကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကကျနော်တို့မှန်မှန်အသစ်သောနေရာများ, ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့လုပ်ဖို့အရူးသောအရာတို့ကိုဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုသည်။ ထိုအခါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်? ကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်း TOCA ဘဝကို၏အတွင်းပိုင်းပထမဦးဆုံးဖြန့်ချိလိမ့်မည်အတူတက်လာမဆိုအသစ်သောတည်နေရာ: ကမ်ဘာ့။
သင်သည်သင်၏ပထမဦးဆုံး download, တို့နှင့်အတူကြွသောအရာကိုထက်ပိုတည်နေရာရချင်လျှင်, ထိုအေးမြပါတယ်။ TOCA ဘဝကို: ကမ်ဘာ့သငျသညျ 300 ဇာတ်ကောင်များနှင့် 125 အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကျော် 50 ကျော်တည်နေရာအကြားရှေးခယျြနိုငျတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့အနေဖြင့်ကြီးမားသောမှကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းများနှင့်အတူသင်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်သို့မဟုတ်တွေအများကြီးထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်အစဉ်အမြဲပိုပြီးရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ update လုပ်ပေးခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေတာဘာလဲ:
TOCA ဘဝကိုကမ္ဘာ့၌သာရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း2နေရာအသစ်များကို: သင်သင်တို့အိမ်အလှဆင်ဖို့ပစ္စည်းများကောက်လို့ရပါတယ်ရှိရာအဆိုပါလုံးဝအရသာ Ro-Rukul Caféနှင့်စူပါခေတ်မှီဒီဇိုင်း Store မှာ။
သင်တဦးတည်း-နှင့်အတူနေဖြင့်တဦးတည်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ကြောင်းအိမ်များ, စားသောက်ဆိုင်များ, အလုပ်ခွင်, စျေးဆိုင်, ဆိုင်များများအတွက်ရွေးချယ်မှုများစွာ, ရဲစခန်း, တစ်ဦး daycare စင်တာ, တစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်တစ်ဦးကစားကွင်း, ကျောင်းများ, တစ်ဦးလူငယ်ကလပ် (သင်ပုံမရ!) ပျော်စရာဇာတ်ကောင်ပါဝင်သည်!
ကြီးမားသောသွားကြဖို့လိုပါသလား? ကျွန်တော်တို့ဟာမတူညီတဲ့ဒေသများ၏တစ်တန်ပါဝငျသော megapack ကိုပဌနာသည်ဤအရာဝယ်ပါ!
စကားမစပ်အဲဒီ extras အပေါငျးတို့သလာပြီလုံးဝကိုသင်မှတက်သည်။ သငျသညျ TOCA ဘဝကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည့်အခါ: ကမ္ဘာ့, သင်ချက်ချင်းခံစားနိုငျပျြောအကြောင်းအရာတစ်တန်နှင့်အတူကြွလာ။ ပေးလျက်ရှိ, ကန့်သတ်သို့မဟုတ်လှည့်ကွက်မရှိပါ။
အဓိကအရာကိုသင် TOCA ဘဝကိုကမ္ဘာ့အခမဲ့သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုတင်ထားရန်အဘို့အကျနော်တို့မစောင့်နိုင်သည်။ အရူးအဘယျသို့သောအရာတို့ကိုသင်တို့နှင့်အတူအဖွင့်လာမယ့်လဲ? ကျနော်တို့သာခန့်မှန်းနိုင်သည်!
Toca Life: World အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Toca Life: World အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Toca Life: World အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Toca Life: World အား အခ်က္ျပပါ
ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္ 62
လိုင္စင္ လိုအပ္သည္ 15
chewbaka26262626 စတိုး 41 11.38k
Toca Life: World ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Toca Life: World အခ်က္အလက္
Toca Life: World APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ